फर्साटिकर कप शुरु, भैरवको विजयी शुरुवात – Khel Dainik
फर्साटिकर कप शुरु, भैरवको विजयी शुरुवात
शुद्धोदन (खेलदैनिक) । मोफसलमा छोटो समय मै लोकप्रिय बनेको रुपन्देहीको फर्साटिकर कपको आठौं संस्करणको रोमाञ्चकता शुक्रबारदेखि शुरु भएको छ ।
शुद्धोदन गाउँपालिका–४ बर्मेली टोल स्थित फर्साटिकर माविको खेलमैदानमा भएको उद्घाटन खेलमा भैरव स्पोर्टस क्लबले कठिन जितका साथ विजयी शुरुवात गर्यो ।
यस बर्ष शुद्धोदन गाउँपालिका आठौं फर्साटिकर कप नामबाट आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा भैरवले केरवानी स्र्पोटिङ क्लबलाई सडन डेथमा ७–६ ले हरायो ।
यसअघि खेलाइएको निर्धारित समयतर्फ ४०–४० मिनटको प्रतिस्पर्धात्मक खेल दुवै टोलीले गोलरहित बराबरी खेलेपछि खेलको निर्णय पेनाल्टीबाट लिइएको थियो । उद्घाटन खेलको म्यान अफ द म्याच भैरव कै सुमित श्रेष्ठ घोषित भए ।
यो जितसँगै भैरव प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलमा समेत प्रवेश गरेको छ । प्रतियोगिता अन्तरगत पुष ११ गते शनिबारको खेल सेन्ट्रल कलेज भरतपुर एफसी, चितवन र जनज्योति युवा क्लब, बुटवलबीच हुने खेल संयोजक टेकु भण्डारीले जानकारी दिए ।
शुद्धोदन गाउँपालिकाका अध्यक्षद्वारा उद्घाटन
यसअघि प्रतियोगिताको उद्घाटन एक कार्यक्रमकाबीच प्रमुख अतिथी शुद्धोदन गाउँपालिकाका अध्यक्ष किशन चौधरीले गरेका थिए । सो अवसरमा आयोजक फर्साटिकर युवा क्लबका अध्यक्ष मुकेश कुँवर लगायतका अतिथीहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
फर्साटिकर युवा क्लबको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले उपाधि सहित नगद २ लाख हात पार्नेछ भने उपविजेताले १ लाख प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तै प्रतियोगिता कै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले नगद १० हजार प्राप्त गर्ने अध्यक्ष आयोजक क्लबका अध्यक्ष कुँवरले बताए ।
कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष कुँवरले फर्साटिकर कपले राष्ट्रियस्तर मै पहिचान बनाइसकेको बताए । उनका अनुसार प्रतियोगितामा स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरका टोली तथा खेलाडीहरुको सहभागिता रहने भएकाले जिल्ला भित्रका खेलाडीहरुले पनि प्रतियोगितामा राष्ट्रियस्तरका खेलाडीहरुसँग भिड्दा राम्रो अनुभव हासिल गर्नुका साथै क्षमता प्रदर्शन गर्न अवसर मिल्ने बताए ।
← प्रदेश लिग पनि तीन प्रदेशहरुमा हुने तय हिमालय गोर्खालाई फुटसल उपाधि →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने पुष १०, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? पुष १०, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली पुष १०, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा पुष १०, २०७७